China nenyunje muchina kupembedza zvikamu fekitari uye vagadziri | TAA
Iyo yekuputika muchina kupembedza zvikamu kusanganisira: mavhiri mavhiri, impeller, impeller kesi, impeller vanes, impeller musoro, guard plate, lining mahwendefa zvichingoenda zvakadaro.
Inowanikwa Spare zvikamu zvezvinhu
Zvemukati meCr-12%, 20%, 25% kana sekukumbira.
Yepamberi & yesainzi chaiyo kukanda Maitiro uye tekinoroji.
Kubudirira kwepamusoro uye otomatiki single chiteshi kuomesa yekugadzira mutsara.
Yakakosha yakakwirira chromium abrasion ichikanda simbi spare parts, inoumba maburi mune epamba indasitiri.
Original Equipment Yakagadzirwa (OEM) zvikamu zviripo.
Isu tinopawo zvemhando yepamusoro aftermarket zvikamu zveimwe michina yemhando.
Pashure: Kufuridza mavhiri
Zvadaro: Kucheka disc FS-01 akateedzana
Blast Wheel Kudzora Yaiba
Nenyunje Machine Spare Zvikamu
Liner Inodzivirira Kavha
Inodzivirira Liner Systems
Unodzivirira pasherefu Liner
Chikamu Chekuchengetedza Plate
Spare Zvikamu zveNyunje Machine
Pamusoro Yevarindi Plate
Wheel akapfura nenyunje
Zvakanakira dhiramu kupfura blast muchina Reliable Blasting Technology: Drum shot blast michina inogadzirwa mune akasiyana akasiyana akasiyana, mhando uye saizi. Iwo macompact uye anongova nekatsika kadiki kwazvo. Kuenderera mberi kubudikidza kunogona kuwanikwa nekubatanidza akati wandei michina. Kugadziriswa-kwehukama Kurongeka: Kugara uchichengetedza kwakakosha kuchengetedza iyo yenguva refu kukosha kweiyo michina. Yakakura sevhisi uye yekuongorora masuo anopa nyore ac ...
Zvakanakira AGTOS rabha bhandi tumble blast michina Yakavimbika yekuputika tekinoroji Innovative firita tekinoroji Mazhinji akasiyana akasiyana Mashini kuburikidza nekuwiriranisa ne - imba yekufambisa system. AGTOS epamusoro-mashandiro emagetsi turbines: Turbines edu akasimba, akagadzirwa-zvakanaka zvidimbu zvemuchina. Nekuda kwenhamba diki yezvipfeko zvekupfeka uye yakanyanya hasha throughput, ivo vanoshanda zvakanyanya zvakapfuma. Vazhinji d ...
TAA yakakwira yekuita blast vhiri vakazviratidza pachavo pamusika kuti vave vakasimba, vane hupfumi hunoshanda uye vanochengetedza-vane hushamwari. Iwo anowanikwa aine akasiyana turbine vhiri dhayamita uye zvakasiyana siyana zvekusarudzika uye zvekupfeka zvinhu (semuenzaniso simbi yakaoma). TAA yakakwira yekuita blast mavhiri anozivikanwa kwazvo pakuvandudza echinyakare epfuti-blasting michina zvakare. Chigadzirwa Zvimiro Kunatsiridza pfumo nenyunje kumhanya pachena Kupfeka kupfeka kusagadzikana Kuderedza kushandiswa kwesimba ...
Kuenderera Mberi Kwepamusoro Rail Shot Blast Machines
Zvakanakira Track-ichipfuura bara nenyunje muchina * Yakavimbika nenyunje tekinoroji: Yedu yepamusoro yekuita turbine zvikamu zvakavimbika kwazvo. Ivo anonyanya kushanda nekuda kwenhamba yakaderera yezvipfeko zvekupfeka, dhizaini-inoshamwaridzika dhizaini uye yakakwira hasha kuyerera chiyero. * Kuchengetedza kwakaderera: Kugara uchigadzirisa kunobatsira kuchengetedza kukosha kwemachini. Makuru ekuchengetedza masuo anopa nyore kuwana kune zvese zvakakosha zvikamu uye inofambisa iyo inokurumidza kutsiva ...
Roller conveyor yakapfura blast muchina
Zvakakosha Zvakanakira AGTOS blasting tekinoroji: Ma turbines edu akasimba emagetsi zvikamu izvo zvinonyanya kudhura-zvinobatika nekuda kwezvishoma zvikamu zvekupfeka uye yakanyanya hasha flfl ow. Nyore kuchengetedza Iyo itsva yekusefa tekinoroji inogutsa kuburikidza neakasimba zvesimba. Kushandisa michina nenyunje pamusoro flfl ame akacheka zvidimbu mutswanda nenyunje mach ...
Semutemo, hanger-mhando kuputika michina inopihwa kungave kwebatch batch kana kuenderera kugadzirisa. Nekudaro, pane akawanda epakati magadzirirwo ayo akatarisana kune akasiyana marudzi epamusoro anotakura masystem. Muzviitiko zvakawanda, akasiyana masisitimu senge kuputika, kupenda uye nekuomesa kunotevera kunogona kuve kwakabatana kuburikidza neiyo yepamusoro conveyor system. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kubata mukana wakakura wekugadzirisa maitiro ekufambisa. Kuwedzera kugadzirisa akasiyana ...